Bonaire: Best Caribbean Island | Otu Di na Nwunye
February 8, 2017 / 7 Comments
Bonaire bụ n'ezie diamond a na-achọpụtabeghị, nke ọma, ọmarịcha mmiri nke ọtụtụ diamond mara mma. Otú ọ dị, Bonaire bụ ihe pụrụ iche na ọ bụ ụdị paradaịs a na-enweghị ntụpọ n'ụwa zuru ezu.
Njem kachasị nta nke àgwàetiti ABC (nke Bonaire na Aruba na Curacao na-eme), ọ dị nnọọ jụụ n'ebe ugwu nke Venezuela na Caribbean. Obere obere agwaetiti a bụ ugbo na mmiri paradaịs, yana otu n'ime ebe ndị kachasị mma na ebe obi ụtọ m nọrọ.
Akụkụ a nke ụwa ebe okpomọkụ nwere ọtụtụ ihe ịtụnanya, nnukwu mbara igwe nke na-adọrọ mmasị ndị njem si gburugburu ụwa. Ihe nzuzo dị n'akụkọ ihe mere eme bụ ma n'oge ochie ma nke ọhụrụ, n'ihi ya, ọ bụghị ihe ijuanya na nke gụnyere mmiri doro anya nke kristal na-anọdụ na paradaịs na ọdọ mmiri nke ị nwere ike ị nụtụbeghị; n'àgwàetiti nke dị nso na Aruba ị ga-ebute ya site na ikuku na-erughị 30 nkeji na Curacao n'ihe gbasara 15!
Ala a na-acha ọcha na aja na-acha odo odo gold-gold nwere ebe pụrụ iche n'ime obi m. Mgbe m bụ nwatakịrị nne na nna m ochie bụ ndị ozi ala ọzọ na Bonaire, wepụtara onwe ha n'ụlọ ọrụ redio Trans World Radio. Enwere m ngọzi iji ezumike ezumike na Bonaire nakwa na m nwere njem njem mbụ m na-eme njem nleta iji gaa leta ha site na ụlọ m na North North US mgbe m dị afọ iri na atọ.
Kemgbe ahụ, Bonaire ejiriwo obi ekele agbanweghị. Àgwàetiti a nọgidere na-adị udo, ọ maara ihe, ọ dịkwa mma. Afọ nwere ike ịfe, ma ọdịbendị na mkpụrụ obi nke ndị mmadụ anaghị eche ka nrụgide yiri ka ọ na-aga n'ihu na-emetụta ụwa.
Mma na osimiri
Bonaire abughi ebe ndi okachamara di iche iche dika ndi ezumike nke Netherlands, oke mmiri ya na ihe ndi ozo na-etu anya na-adi mma maka ndi mmadu na-achoputa ihe n'uwa dum, ebe ha ka na-abughi ihe nzuzo nye otutu ndi njem.
Dị ka akụkụ nke ABC Islands na Antilles Leeward (nke gara aga na Caribbean Antilles), Bonaire enweela ọhụụ nke ịnọ n'ụsọ njem na-enweghị atụ. Naanị 24 kilomita n'ogologo, Bonaire na-anọdụ ala dị ka nke kachasị elu na mmiri mmiri na Caribbean. A na-ejikwa nlezianya na-echekwa mmiri osimiri a na-aga n'ihu site na nchekwa nzuzo nke onwe na nke gọọmentị, na-edebe Bonaire na paradaịs kemgbe 1979.
E nwere ọtụtụ osimiri mara mma nke na-acha ọcha na-ahọrọ site na, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị mma maka nkedo ma ọ bụ mmiri mmiri, ma e wezụga ebe ugwu nke àgwàetiti ahụ ebe mmiri na ebili mmiri zuru ezu iji kụtuo gị n'ụkwụ n'otu ntabi anya!
N'ịbụ ndị dị n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke àgwàetiti ahụ, Sorobon Beach bụ ebe mara mma maka ịkọ ụgbọ mmiri na igwu mmiri, nakwa dị ka ezumike na anyanwụ. Otu n'ime oke osimiri kachasị mma na Caribbean, ebe a ị nwere ike ịghaghachi azụ mmanya mmanya na-ekpo ọkụ na-ekiri ndị ifufe na-ekpo ọkụ na ụwa na-ebukarị ebili mmiri na Sorobon.
A na-ahụkwa ebe a bụ Sorobon Beach Resort na ebe a mara mma nke na-atọ ụtọ na ọdụ ụgbọ mmiri, nke a na-ahụ n'anya nke Bonaire maka ezigbo oge kemgbe 1988.
Okirikiri osimiri a na-acha odo odo dị na Belnem district, nke dị nnọọ n'ebe ndịda nke ọdụ ụgbọelu. Ịnọdụ ala na ala elu nke elu ugwu 10, ị nwere ike ịbanye n'akụkụ elu nke steepụ ma mee ka ụzọ gị gbadaruo ebe a mara mma ma mara mma. Mgbatị a bụ, dịka ọtụtụ osimiri dị na Bonaire, zuru oke maka ịkọ ụgbọ mmiri na mmiri.
Nzọụkwụ ahụ dị nnọọ n'okporo ụzọ ma dị mfe, na ngwa ngwa na mmiri. Ndị obodo ahụ na-adụ gị ọdụ ka ị hụ ebe ị na-aga ụkwụ na njedebe nke nzọụkwụ ebe oké osimiri ahụ nwere ike ime ka ọ bụrụ akara!
Nke a bụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị nke obodo ndị dị na Bonairean, ebe buru ibu iji nọrọ oge ezumike n'echiche nile nke okwu ahụ - nweta tan, buru mmiri, wee nwee esi nri! Dị ka ọtụtụ osimiri ndị ọzọ dị na Bonaire, ndụ oké osimiri na-aba ụba na nke mara mma, ọ bụkwa naanị ụgbụ mmiri si n'ikpere mmiri. N'oge ufodu ubochi, enwere ugbua ka ndi mmadu kwusi site na - Kite City food truck, nke na-eri nri ndi ozo ohuru!
Bonaire bụ agwaetiti pụrụ iche n'ọtụtụ ụzọ - otu n'ime ha bụ mmụba nke ịnyịnya ibu ọhịa na-aga n'ógbè ahụ (nakwa ebe anụ ọhịa). Ọ bụ ezie na osimiri a nwere ike ịbụ ihe na-adịghị mma, ọ bụ mmasị mpaghara, ebe na-akpali akpali maka ihe niile na-egwu mmiri na nkedo.
Ebe a dị mma maka ndị ọbịa ọhụrụ na ndị na-agakarị osimiri, dịka ngwụsị izu na-aghọ ebe dị egwu na mpaghara, egwu ezinụlọ na ikuku nke ọma!
Klein Bonaire (Ọ dịghị aha Beach)
Na mgbakwunye na ebe a na-ewu ewu na agwaetiti ahụ, Klein Bonaire bụ obere agwaetiti na-adịghị bi naanị 15 nkeji. Ụzọ kachasị mfe iji nweta Klein Bonaire si Kralendijk bụ site na taxi mmiri site na Caribe Watersport, nke dị na Eden Resort Beach dị n'akụkụ Klein Bonaire, n'onwe ya. N'elu osimiri Klein Bonaire, ị ga-ahụ onwe gị na "No Name Beach", nke na-enweghị obi ụtọ, nke na-acha ọcha ọcha ma nabatara mmiri mmiri na-acha anụnụ anụnụ na-agbaji ala. Jide n'aka na ị ga - ebute snorkel gear (ị ga - enwe ohere dị na ebe a!), N'ihi na osimiri a dị mma maka ndị na - anụ ụzụ nke nkà na ụzụ niile dị ka mmiri na - agagharị na mmiri na - adị jụụ. Enweghị Aha Beach bụ otu n'ime osimiri ndị kasị mara mma na Bonaire, na nke ga-eme ka ị nweta ụdị nke ị na-achọ.
Jide n'aka na ị ga-ebutekwa akpa mmiri na nri, n'ihi na Klein Bonaire enweghị ebe obibi na okwu ọ bụla nke okwu ahụ! Enweghị ebe mmiri na-ere ma ọ bụ ndị na-ere ahịa, ya mere mee ihe ọ bụla i chere na ị ga-achọ site n'ala. Ọfụ na ọ bụ nanị ụgbọ mmiri iri na ise na-agbago ụzọ ọ bụla na taxis na-aga na nke di na nwunye ọ bụla. N'elu osimiri, enwere obere ebe obibi ebe ị nwere ike ijide ndò ma ọ bụghị n'ime mmiri ma ọ bụ na-acha ọkụ, ma na-ejide ya!
Mpaghara a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mma anyị, n'agbanyeghị enweghị ebe ndị na-agba mmiri. Buddy Dive nwere ụfọdụ snorkel na ụgbọ mmiri ndị anyị hụworo n'àgwàetiti ahụ. E nwere ọdọ mmiri na ọtụtụ ebe mara mma iji zuru ike.
Na mgbakwunye na ịma mma, ị nwere ike ịgbazite igwefoto mmiri na-enweghị mmiri maka ụbọchị ahụ, na-egwu mmiri n'ime obi gị, mgbe ahụ, ha ga-enye gị diski nke foto ọ bụla i were! Azụ dịgasị iche iche na ebe a bụ ihe na-adọrọ adọrọ mgbe ị na-etinye ihe mkpuchi ahụ wee malite ịdata akwa ahụ na mmiri doro anya.
Otu mgbakwunye na ebe a bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, nke na-enye ihe dị ịtụnanya, nri ọhụrụ, na ịnwere ike ịnọdụ ala na-ele mmiri anya. I nwedịrị ike ịnwe onye ọbịa ma ọ bụ abụọ na-achọ tomato ọhụrụ ma ọ bụ letus crap. A gbara gị ume ka ị ghara ịzụ ha, mana echegbula - ha dị ezigbo enyi! Anyị na-ejiri obere oge na-abanye enyi anyị na-eri nri ehihie ugboro ole na ole!
Atụmatụ Ụgbọ njem
Mma nke Bonaire kwenyere na ọ dị mfe na-agbakwụnye n'udo. Enwere nanị ụzọ abụọ dị n'àgwàetiti ahụ, otu North na otu South, nke na - eme ka ọ dị mfe igodo ma ọ bụrụ na ịhọrọ ịgbazite ụgbọ ala site na ọdụ ụgbọ elu mgbe ị nọ ebe ahụ, ọ bụ ezie na ọ dịghị mkpa ịtụle nbịaru nke ihe omume ọ bụla ị ga-enwe mmasị na.
N'agbanyeghị enweghị usoro njem njem ọha na eze, taxis dị nnọọ ala ma na-agba ọsọ site na mpaghara obodo ndị na-asụ Bekee. Na nleta ikpeazụ anyị, anyị na-enwe mmasị ịgagharị n'àgwàetiti ahụ ọtụtụ oge na Victor, onye na-akparịta ụka nke ọma na enyi onye ọ bụla nọ n'ụlọ anyị!
Ọ bụrụ na ị na-achọkwu ifufe na ntutu isi gị mgbe ị na-agbapụ kwa ụbọchị, jide n'aka na ị ga-enwe ohere iji ụkwụ na-agagharị n'àgwàetiti ahụ site n'ụgbọ ịnyịnya, ma àkwà ma ọ bụ ebe niile dị, ma ọ bụ ịchọpụta ngwa ngwa na igwe eletrik. Lelee Scooters Bonaire ma ọ bụ Bonaire Eco ndụ iji gbazite njem gị abụọ maka ụbọchị. Bonaire na-agba ume njem njem nlegharị anya nke ebe obibi site n'inye ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ dị na Sorobon, Rincon, na Wilhelmina square na Kralendijk.
Anyanwụ ka anyanwụ na-abanye na Island
N'ọfe oké osimiri na ndụdụ, agwaetiti ahụ nwere ihe dị ukwuu iji dọta onye ọ bụla njem na-achọ ntụrụndụ, tinyere ebe ndị mara mma dị ka Eden na Buddy Dive, ma n'ime nkeji nke ụra abalị nke obodo Kralendijk (obodo na-atọ ụtọ ma na-eme egwuregwu nke dị anya site na ụzọ ọnyà nke spellcheck enweghị ike ịghọta aha ya!).
Ezigbo ntụrụndụ nke Bonaire, nakwa nke ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị enyi na enyi na obodo, na-ezute ntụrụndụ, ịma mma na ịma mma, yana obi ụtọ. N'oge ọ bụla i nwere ike ịhụ onwe gị na-aṅụ Pina Colada na nkọwa doro anya nke paradaịs, ụwa na-enweghị nchegbu ọ bụla, ahụhụ, ma ọ bụ ụgwọ ụgbọ ala!
Maka ndụ abalị na Bonaire, ị gaghị aga ebe dị anya ma ọ bụrụ na ị na-anọ n'otu ebe ndị mara mma na-agbada n'okporo ụzọ si n'obodo. Ihe nkasi obi kachasị mma nke izu ụka anyị chọtara bụ Spice Beach Club, nke dị n'akụkụ Eden Eden. Inye nri na-atọ ụtọ na ezigbo cocktails ọnụahịa, ọkụ ọkụ na-eme ka Caribbean na-eche ihu n'akụkụ ọ bụla Friday N'abalị na egwu ndụ, ọkụ, na ikuku nke ikuku nke na-eme ka i jide n'aka na ị ga-eme ma ọ dịkarịa ala ndị enyi ọhụrụ 10 dị ka di na nwunye abụọ!
Maka ndị na-egwu egwú, enwere ọtụtụ nhọrọ ị ga-aga na ịkụ aka nke ịhọrọ, gụnyere Little Havana, Karel's Beach Bar, na Plaza Resort Bonaire nke na-asụ Latin n'abalị ọ bụla Saturday mgbede. Naanị ndebanye aha ngwa ngwa, Plaza Resort na-enyekwa ụlọ ọrụ salsa n'efu site na 6 ruo 7 pm, mgbe nke a gasịrị ị nwere ike ịgba egwu na nke kachasị mma! Ọ bụrụ na ịgba egwú abụghị ihe gị, gaa na casino na Divi Flamingo, ebe ị nwekwara ike ịnwale nkà gị na tebụl na ohere, na-emeghe n'oge ọ bụla ma e wezụga Sunday. Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme na Bonaire maka ọbụna ogologo izu ụka!
Mgbe na Bonaire, jikwa n'aka na ị nwere ole na ole (ma ọ bụ ọtụtụ!) Nke ọkacha mmasị ha n'ógbè ahụ, Amstel's Bright beer. Ihe na-enye ume ọhụrụ na osimiri na anyanwụ, Bright na-arụ ọrụ n'ebe niile ma na-akwụ ụgwọ ọnụ! Na mgbakwunye na nke a mbinye aka, bulie iko nke agwaetiti ọhụrụ ahụ ma keezie "Bonaire Blond", ọkụ na citrus nke na-eto eto na-emepụta ihe ndị a na-etolite na mpaghara ahụ!
Na nkenke, ndụ abalị na Bonaire bụ ihe na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ, ma na-emeghe ruo oge elekere nke abalị, ikekwe ogologo oge mgbe i zubere ịtụgharị!
Ngwá Nnu na Flamingos
Otu akụkụ pụrụ iche nke àgwàetiti a bụ na, n'agbanyeghị na ọ bụ ntakịrị ibu na ala ịkpa a na-apụghị ibi ndụ, e nwere otu n'ime ụwa Flamingo Sanctuaries ụwa. Ebe nke Pekelmeer Flamingo na-eguzo dị ka ebe a na-azụ anụ maka nnụnụ nnụnụ na-acha ọcha, ebe bụ isi maka ebe nnu nnu ebe ha na-eme nsị ha.
Ebe nsọ ahụ na-egbochi ndị ọbịa, ma ebe ọ bụ na mpaghara (karịsịa na Green Beach) ị ga-enwe nrụgide ka ị ghara ịhụ ìgwè atụrụ na-efe efe. Flamingos Bonaire nwere ihe pụrụiche dị iche iche nke ịbụ ụfọdụ n'ime pinkest na ụwa n'ihi nri ha, nke jikọtara ya na red carotene!
Nakwa, na-ele anya ka ha na-efe efe, n'adịghị ka ábụbà ha dị elu, ha mara mma nke sitere n'okpuru ebe a pụrụ iji ọdịiche nke nku nku ha na-atụgharị anya ka ha na-efefe.
Bonaire na-adịgide adịgide
E nwere ọtụtụ ihe a pụrụ ikwu, kọwaa, wepụta foto ma cheta banyere agwaetiti a mara mma. Ọ bụrụ na ịnweta ohere ịhụ ya, were ya niile! Site na obi ụtọ na ihu ọma nke ndị mmadụ, na nri ọhụrụ, na ịma mma nke ala na ihe niile Caribbean oké osimiri ga-enye, enweghi ike inwe ụdị ahụmahụ pụrụ iche a ga-enwe na ụwa a.
N'akpuchi ya ruo ọtụtụ iri afọ, ọ ga-anọgide na-adị, nke bụ nanị otu ihe na-adọrọ mmasị na nke na-enye obi ụtọ banyere mgbanwe a dị ịtụnanya na ndụ.
Category: Bonaire, Caribbean, Di na Nwunye, Nri na ihe ọṅụṅụ, kasị Popular Tags: beach, bonaire, Caribbean, mmiri, kralendijk, na-egwusi egwu
← Amsterdam a na-atụghị anya ya
Nyochaa: Venice's Hotel Vecellio →
7 Comments na "Beautiful Bonaire: Ihe kacha mma na Caribbean Secret"
Bonaire bụ ebe dị mma ịga leta. Ihe m hụrụ n'anya banyere ebe a bụ ụdị ndụ ya. Bonaire kpuchiela gị nke ọma.
Daalụ nke ukwuu! Nke a bụ ezigbo ekele, Bonaire bụ n'ezie ebe dị ịtụnanya na otu n'ime ebe mmasị anyị. E nwere ọtụtụ ihe ọzọ a pụrụ ikwu karịa ihe dị na nke a - anyị kwadoro onye ọ bụla ịga ebe ahụ ọ dịkarịa ala otu ugboro ná ndụ ha 🙂
Daalụ maka ozi a niile. Enweghị m ihe ọ bụla banyere ebe a ruo taa. Otu enyi na-arụ ọrụ na-atụ aro na mụ na di m ga-eme njem gaa ebe ahụ ka m wee nwee obi ụtọ. Nke a bụ nke kachasị ihe ọmụma nke m gụrụ. Daalụ maka ịkekọrịta nke a. Aga m elele ụfọdụ posts ndị ọzọ! Mụ na di m na-achọ ịga njem dị ka o kwere mee ka blọọgụ ahụ dabara adaba maka anyị! 🙂
Enwere m ekele maka ya, Britanica! Bonaire, kwere ya ma ọ bụ na ọ bụ, ọ bụ ebe anyị kachasị amasị anyị. Ọ bụ ihe ijuanya na mmadụ ole na ole nụrụ banyere ya.
Nwere ike 16, 2017
Ezigbo ozi ị nwere n'ebe ahụ. Nke a bụ n'ezie oge mbụ nke ịgụ akwụkwọ gị.
Anọ m na-eme nyocha maka ebe zuru oke na Caribbean maka ezumike m. Ebe a dị ka ihe m na-achọ.
Daalụ maka ịkekọrịta nke a. Ga-ewe oge m iji kọwaa Ama ebe a.
Daalụ Christine, obi tọrọ gị ụtọ!
Ezigbo ebe mara mma. Ezigbo ndụmọdụ ma kọwaa ya n'ụzọ mara mma. Daalụ maka ịkekọrịta.